Dowladda Soomaaliya oo dacwad ka dhan ah Kenya u gudbisay Golaha Ammaanka – Banaadir Times
Dowladda Soomaaliya oo dacwad ka dhan ah Kenya u gudbisay Golaha Ammaanka
By banaadir 15th June 2021 39 No comment
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cusmaan (Abuukar Baalle) ayaa Golaha Ammaanka u gudbiyay caddeymo muujinaya duqeymo Diyaaradaha Dagaalka Kenya ay ka geysteen Gudaha Soomaaliya.
Danjire Abuukar Baalle ayaa Golaha Ammaanka ka hor akhriyay cadeymaha ay heyso dowladda Soomaaliya ee la xiriira waxyeellada Ciidamada Cirka Kenya ay ka geysteen Gobalka Gedo, taasoo dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay ku jiraan Caruur iyo Haween.
Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan ka hadashay qasaaraha soo noqnoqday ee diyaaradaha dagaalka Kenya ka geystaan gudaha Soomaaliya, waxyeellana gaarsiisa dad shacab ah, laakiin waa markii koowaad ee ay xukuumaddu caddaymo geyso Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya oo muddo kala go’onaa ayaa maalmihii la soo dhaafay ahaa mid soo hagaagayaa, waxaana la ogeyn saameynta uu yeelan doono qoraalka ka dhanka ah Kenya oo ay dowladda Soomaaliya u gudbusay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Maamulka Gobolka Bari oo Amaro soo saaray
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo degaano dhowr ah la wareegay
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dib u fureyso safaaradeeda Kenya
By banaadir 13th June 2021
Howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo la amray
By banaadir 1st June 2021
Dowladda Soomaliya oo soo dhaweeysay heshiiska xabad joojinta ee Qasa
By banaadir 23rd May 2021